Fitaovana an-tserasera hametrahana ambadika fotsy amin'ny sary | Vaovao momba ny gadget
Fitaovana an-tserasera hametrahana ambadika fotsy amin'ny sary
Paco L Gutierrez | 18/12/2020 19:02 | Nohavaozina amin'ny 21/12/2020 19:39 | sary
Ny fanitsiana sary dia zavatra azon'ny tsirairay atao amin'ny alàlan'ny telefaona finday na solosaina ary izany dia manome antsika fahafaha-manao betsaka rehefa miasa miaraka amin'ny sary. Ny fanovana ny lasa ambadika fotsy no be fangatahana indrindra avy amin'ny olona, ​​fa tsy ny olona mahalala tsara izay sivana na fampiharana tokony hampiasaina hahatratrarana an'io valiny io. Ny fiaviany fotsy dia manome sary endrika tsy miovaova ary tsy misy fanelingelenana.
Ho fanampin'izany, ny iray amin'ireo antony dia mety hoe maniry hampiasa sary tsara isika hampiasa izany amin'ny antontan-taratasy ofisialy, toy ny DNI na fahazoan-dàlana hivezivezy. Matetika koa ny fampiasana an'io karazana fitaovana io amin'ny sary na avatar. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hasehontsika ny safidy tsara indrindra hanovana ny faran'ny sarintsika ho fotsy amin'ny dingana tsotra.
1 Fitaovana an-tserasera hametrahana background fotsy
1.1 Esory ny BG
1.2 Fanesorana AI
2 Fampiharana hametrahana ny fotsy fotsy amin'ny finday
2.3 Tonian-dahatsoratra Black Eraser Blackaser
Fitaovana an-tserasera hametrahana background fotsy
Esory ny BG
Fampiharana an-tranonkala tena be dia be izay manolotra anay mpamoaka lahatsoratra mahay mamantatra ny olona sy ny zavatra na ny biby. Hesoriny tanteraka ny sary ao aorian'ny segondra vitsy. Tsotra ny fampiasana an'ity tranonkala ity raha ny miditra amin'ny tranokala ofisialy.
Na dia tena marina aza ny asany an-tserasera, manana rindranasa birao isika raha ilaina, samy ho an'ny Windows, MacOS na Linux. Ity rindranasa birao ity dia manome antsika fahafaha-manao sy asa hamafana ny ambadiky ny sarinà sary maro be avy hatrany.
Izy io koa dia azo ampidirina amina fitaovana hafa toa an'i Zapier izay ahitantsika plugins hafa hampifangaro azy amin'ny sehatra hafa. Raha zavatra mitovy amin'ny horonan-tsary no tadiavintsika dia manana fitaovana hamafana ny fiavian'ireo horonantsary ilay mpamorona iray ihany.
Fitaovana manokana iray hafa hamafana ny vola ny Removal AI, izay ho an'ny maro dia iray amin'ireo tsara indrindra hatramin'izay tsy vitan'ny hoe mieritreritra ny fanafoanana ny fototra fotsiny fa koa manampy fanodinana aorian'ny fandinihana ny saina izay manome ny sary tsy fitoviana izay tsy misy rindrambaiko hafa manome anao. Ny valiny farany dia tena mitovy amin'ny zavatra azontsika raisina miaraka amina tonian-dahatsoratry ny sary, zavatra ankasitrahana raha te hampiasa fampiasa sary.
Raha fintinina, raha mitady zavatra haingana miaraka amin'ny Delete BG ianao dia manana fa ampy, fa raha mila valiny "tsara" kokoa ianao dia tena mety ny Removal AI.
Fampiharana hametrahana ny fotsy fotsy amin'ny finday
Raha mitady mpanonta sary isika dia hahita be dia be izay ananantsika ity fitaovana ity, saingy tsy dia be loatra izany ataovy mora amintsika ny mampiasa azy ireo eo noho eo. Eto izahay dia hanisy tsipiriany momba ny 3 tsara indrindra sy tsotra misy amin'ny findainay.
Ny iray amin'ireo fitaovana malaza indrindra amin'ny fanitsiana sary dia tsy isalasalana fa ny Adobe Photoshop, tonga lafatra ho an'ny fanovana solosaina na finday. Mora ho an'ny anarana ny maneno lakolosy satria ankoatry ny fanovana sary dia manana rindrambaiko hafa. Ankoatry ny fametahana ny fotsy fotsy amin'ny sary, dia manana safidy toy ny fanapahana sary, fametrahana sivana, fanaovana endrika manokana na fanaovana mari-drano.
Manana kinova samihafa izahay amin'ity rindrambaiko ity, izay ahitantsika ny kinova ho an'ny Windows, ny kinova ho an'ny macOS eo ambanin'ny famandrihana ary ny fampiharana ho an'ny terminal finday na Android como el iOS. Raha mitady rindranasa marobe ianao, ankoatry ny fanananao ny fitaovana manome an'io fiasa io, dia manampy anay koa hanao fanontana tsotra ny sarinay, tsy isalasalana fa io no safidy tsara indrindra.
Adobe Photoshop Express: sary sy collage
Ity rindranasa ity dia natokana manokana ho an'ity fiasa manokana ity, tsy isalasalana fa ny tena voatondro raha ny hany fikasana dia izany, na dia izany aza tsy misy ny safidy fanovana mandroso rehetra ananan'i Adobe. Mamela anao hamafa ny volam-bola ho azy miaraka amin'ny faharanitan-tsaina solon'ilay fampiharana mihitsy. Ho fanampin'izay, ny fampiharana dia manome antsika loko marimaritra iraisana ankoatry ny endrika fotsy na mihoapampana aza.
Manolotra modely marobe antsika ilay rindranasa, saingy afaka mampiasa ny sarinay manokana ihany koa izahay hanovana ny fiaviany ary hamorona sary miavaka. Ny fampiharana dia misy na amin'ny Android na amin'ny iOS, Tsotra be ny asany. Izy io koa dia manampy antsika hamorona PNG miaraka amin'ny sary ary hampiasa azy ireo amin'ny fanitsiana sary. Azontsika atao ny mahita ireo kinova sy takiana samihafa ao tranokala ofisialy.
Tonian-dahatsoratra Black Eraser Blackaser
Fampiharana lehibe iray hafa natokana ho an'ny famoronana PNG sy rindranasa fiaviana ho an'ny sarinay izay mety indrindra ho an'ireo mpampiasa iPhone. Izy io dia raisin'ireo mpampiasa azy ho fampiharana fanovana tena mahafinaritra sy intuitive. Ny fampiharana dia tena mora ampiasaina amin'ny terminal rehetra eo amin'ny sakana raha tsy miadana na tsy mahomby.
Ny fampiharana dia mitarika antsika hahafahantsika manova mora foana ny sarinay, Azontsika atao ny mampihatra ambadika mangarahara hamoronana PNG, fiaviana fotsy na fiaviana avy amin'ny galeriantsika manokana. Manome antsika fahalalahana ihany koa ny manitsy sy mamerina mamerina manamboatra ny sary araka izay itiavantsika azy, manampy sivana na famerenana ny lokon'izy ireo. Mila misintona ny rindranasa avy amin'ny AppStore fotsiny izahay ary mankafy azy io maimaim-poana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Sary sy feo » sary » Fitaovana an-tserasera hametrahana ambadika fotsy amin'ny sary
Ny lalao fitifirana tsara indrindra ho an'ny PC
Ny totozy sy fitendry mitokisa amin'ny fifandraisan-davitra, mendrika izany ve?
Torolàlana momba ny teknolojia